Madaxwaynaha Liibiya Wafiz Al-Sarraj oo la kulmay Donald Trump iyo Washintoon oo Taageertay heshiiska Siyaasadeed ee dalka liibiya – Radio Muqdisho
Madaxwaynaha Liibiya Wafiz Al-Sarraj ayaa Jimcihii kulan laqaatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kulankasi oo kadhacay Aqalka Cad .
Al-Sarraj ayaa horay ula kulmay Xoghayaha Arrimaha Dibedda Rex Tillerson, wuxuuna ka wada hadalnay sidii loo taageeri lahaa dadaalada Qaramada Midoobay ku doonayso Arrimaha Gaarka ah ee D dalka Liibiya
Gaassan Salameh ayaa waxa u sheegay . Tillerson in uu xaqiijiyay taageeradiisa buuxda ee dalka Soomaaliya ay uu hayan, iyo Xukuumadda Dib-u-heshiisiinta Qaranka iyo ballan-qaadkooda ku aaddan taageerada dadaalka dadka Liibiya si loo dhiso mustaqbal deggan, midnimo iyo barwaaqo. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Maraykanku uu sii wadi doono taageerada heshiiska siyaasadeed ee Liibiya ee lagu saxiixay magaalada Morocco wuxuuna u arkaa in ay tahay qaabka kaliya ee xal siyaasadeed logu heli karo.
“Isku dayga ah in la mariyo nidaamkii siyaasadeed ee QM ay taageertay ay kenay xalka milatari ee dalka Liibiya, waxaanay siinaysaa fursado uu fududeynay ururka Islamic iyo kooxaha kale ee argagixisada si ay ugu hanjabaan Mareykanka iyo xulafada kale,” ayuu yiri afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Heather Naewert. Intii lagu guda jiray soo dhaweynta, Tilerson ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada Liibiya in ay si wax ku ool ah uga qayb galaan dhexdhexaadinta Qaramada Midoobay si ay “u horumariyaan geeddi-socodka dib-u-heshiisiinta qaran oo ay aasaas u aheyd qabsashadii Liibiya si ay u abaabulaan doorashooyin heer sare ah.”
Fayezal Sarraj ayaa booqasho ku tagay Mareykanka Jimcihii xili u ku sugna Xoghayaha Difaaca James Matisse Al-Serraj.waxa uu wajahayaa dhibaatooyin ka dhan ah xaaladdo Amaan dalka Liibiya, tan iyo markii uu dhacay xukunkii Mucamar Al-Gaddafi sanadkii 2011